Windows 8 မှာ ပိတ်ထားတဲ့ Administrator Account ပြန်ဖွင့်ချင်ရင် ~ လမင်းတရာ
Windows 8 မှာ ပိတ်ထားတဲ့ Administrator Account ပြန်ဖွင့်ချင်ရင်
IN windows 8, နည်းလမ်းများ - ON 6:46 PM No comments
Windows 8 မှာဆိုရင် Default အနေနဲ့ Administrator Account ကို Desable လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ Administrator Account Disable လုပ်ထားတဲ့အတွက် အချို့ Program တွေ Software တွေကို Install လုပ်တာတို့ ပြန်ဖြုတ်တာတို့ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် Error တက်တတ်ပါတယ်။ Administrator Account နဲ့ Log on ဝင်ပြီးမှ Install လုပ်တာတို့ ပြန်ဖြုတ်တာတို့ကို ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Administrator Account ကို Disable ဖြစ်နေလို့ Enable လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းသုံးမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီနည်းသုံးမျိုးနဲ့အတူ အလွယ်တစ်ကူ ပြုလုပ်နိူင်ပါတယ်။
1. ပထမတစ်နည်းကတော့ Local Users and Groups ကနေ လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး Local User and Groups ထဲကို သွားဖို့အတွက် My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး Manages ထဲကိုသွားပါ။ Computer Manages Box ကျလာရင် Local User and Group >> User >> Administrator Account ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး Properties ထဲကိုသွားပါ။ ပြီးရင် Account is Disable ဆိုတဲ့ Check box က အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးပြီဆိုရင် Computer ကို Log off လုပ်လိုက်ပါ။ Administrator Account ပါ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
2. နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ Command Prompt ကနေ ပြုလုပ်ရမှာပါ။
Administrator Account ကို Command Prompt ကနေ Enable လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Windows 8 ရဲ့ Start Screen ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး All Apps ကိုသွားပါ။ Windows System အောက်က Command Prompt ကို Select ပေးပြီး အောက်ဘား မှာရှိတဲ့ Run as Administrator ကိုနှိပ်ပါ။ Administrator Command Prompt ပေါ်လာရင် Net User Administrator /active:yes ကိုရိုက်ပြီး Enter နှိပ်လိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင် Administrator Account ကို Enable လုပ်လို့ရပါပြီ Disable ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Net User Administrator /active:no လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
3. နောက်ဆုံးနည်းကတော့ Local Security Policy ထဲက လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Local Security Policy ကနေ Administrator Account ကို Enable လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Control Panel ထဲကိုသွားပါ။ Control Panel ထဲကိုရောက်ရင် Administrative Tools ထဲက Local Security Policy ထဲကိုဝင်ပါ။ Local Security Policy Windows ကျလာရင် Local Policies အောက်က Security Options ကို ဖွင့်ပါ။ ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ Accounts: Administrator Account Status ကို Double Click နှိပ်ပြီး Enable လုပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
Ref: Myanmar ICT Journal
Your Uninstaller! Pro 7.5 Full version with serial...
ကွန်ပျူတာမှာ Screen Shot ရိုက်ချင်သူတွေအတွက် Miril...
3DPageFlip 2.6.4 For Pc 45MB
TeamViewer Portable 8.0.18051
Auto Hide IP 5.3.4.2 Full Version
Smart Driver Updater 3.3.0.0 Portable
ဖိုင်တွေ Copy ကူးရာမှာ မြန်ဆန်လှတဲ့ TERACOPY PRO V...
Google Earth Pro 7.1.1.1580 Portable
Ashampoo WinOptimizer 10.02.00 Full with Regkey/C...
Winamp Pro v5.7.3363 Final full with Keygen
StartIsBack 2.0.2 with Trial Reset
BYclouder Photo Recovery v6.8.1.0 For Pc 4.7MB
Smart Registry Cleaner Pro 4.5.2 Full Version
Facebook Page မှာ အလိုအလျောက် ပိုစ့်တင်နည်း
Lock ကျနေသာ Facebook အကောင့် ပြန်ယူနည်း
Wise Care 365 Pro 2.28 Build 185 Full Version
Internet Download Manager 6.15 Build9Final
AV Uninstall Tools Pack v 2013.03 Full Version
Modern Combat3apk For Andriod Free Download Full...
Intel Pentium4 865 All Drivers For Windows Xp / 7
အင်တာနက်ပေါ်ကနေ မြဝတီ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေကြည်...
System Speed Booster v3.0.0.8 Full Version
Revo Uninstaller Pro 3.0.5 Full Version
Google Earth Pro 7.1.1.1580 Full Version
မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန် စာအုပ...
Uninstall Tool 3.3.0 For Pc 6MB
Foxit Reader 6.0.2.0413 Final
High Digital Photography မြန်မာလို ( EBook ) 50 MB...
စစ်တိုက်ရင်း လက်ကွက်လေ့ကျင့်မယ် For Pc 42MB
Facebook အကောင့် Lock မကျအောင် ဒီလို ကာကွယ်ထားပါ
PowerISO 5.6 Full with Keygen
Advanced SystemCare Pro 6.2.0.254 Final Full Versi...
PDF စာအုပ်လုပ်ချင်သူများနဲ့File Format အမျိုးမျိ...
Loaris Trojan Remover 1.2.8.3 with Crack Full Vers...
Evaer Video Recorder For Pc 12MB
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ မြန်မာစာ ရိုက်တတ်ချင်တဲ့ (လက်ကွက်က...
ကွန်ပျူတာထဲက ရှင်းလို့မနိုင်တဲ့ အမှိုက်ဖိုင်တွေအတွက...
ကိုယ်ပိုင်ဗွီဒီယိုလေးတွေမှာ Watermark ထည့်ဖို့ Vid...
၀က်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းယူထားပြီး Offline မှာလေ...
လွယ်ကူ ရိုးရှင်း၊အဆင့်မြင့် ရုပ်/သံ တည်းဖြတ်ခြင်း ...
Wise Care 365 Pro 2.28 Build 185
Windows 8 Lock Screenကို Disable လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်...
Windows 8 မှာ ပိတ်ထားတဲ့ Administrator Account ပြန...
မြန်မာနိုင်ငံမှ လူကြိုက်အများဆုံး ၀က်ဆိုက်များ
ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ Registry ဖိုင်အကြောင်းနဲ Regi...
Auto PowerOn and ShutDown 2.80
Smart Driver Updater v3.3.0.0
Set upaSmall Office or Home Office Network မြန်မ...
Aiseesoft Audio converter v6.2.5.2
CyberPower Audio Editing Lab 15.8.2 with key
Who is On My WiFi 2.1.7 full with keygen
Glary Utilities Pro 3.1.0.95 Full version with ke...
Ulead Media Studio Pro 8 For Pc (127.99 Mb)
Photo Slide show Maker Platinum 5.56 Full Version
MagicRar Studio 8.7 Build 4.1.2013.8395 Full Versi...
G-mail Details pdf လေးပါ
ဘာသာစကား(၅)မျိုး အဘိဓာန် I-Dictionary Version 0.0....
Express Burn Plus 4.65
CyberPower Video Switch 4.2.5 with serial
4Media Video Converter Ultimate 7.7.2.20130411 ful...
Universal Scientific Calculator - Kalkules 1.9.0.1...
Photo Instrument 6.2.621 Full Version
Program4Pc PC Video Converter v6.2 For Pc
Photoshop သမားများအတွက် Brush လှလှလေးတွေ
Windows 8 Manager 1.0.9.0 Full Version
Leawo DVD Creator 5.1.0.0 Full Version
Mobile Web Design Elements Ebook မြန်မာလို
USB Stick, Memory Card ထဲက မှားပြီး Format ချမိတဲ့...
Video တွေမှာ Subtitle လို့ခေါ်တဲ့ စာတန်းထိုးလုပ်တဲ့...
SWiSH Max4 v4.0 build 2011.6.20 Portable
ကွန်ပျူတာရဲ့ CPU ( Central Processing Unit ) အကြော...
လက်တွေ့ အသုံးချ အကောင်းဆုံး ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ချင်း...
Wise Care 365 Pro 2.28 Build 185 Final with Keygen...
Aiseesoft Total Video Converter Platinum v6.3.28 P...
Adobe Photoshop Lightroom 4.3 Full Version ( 771 M...
Winamp 5.70 Build 3364 Beta 4
Advanced Video Compressor 2012
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300 Final
SpeedConnect Internet Accelerator 8 + Crack Full V...
Registry First Aid Platinum 9.1.0 Build 2157 ( 15 ...
ကွန်ပျူတာ စာရင်းကိုင် သမားများအတွက် Peachtree Acco...
TechSmith Camtasia Studio v8.0.4 Build 1060 Full V...
CyberLink PowerDVD Ultra 13.0.2720.57 Full Version...
Nero Burning ROM 12 Portable
Ashampoo Music Studio 4.0.7.21 Full with Reg/Crack...
Photo Collage Max 2.1.9.6 Full With Patch/Crack
Nitro Pro 8.5.2.10 (x32bit/x64bit) With Keygen
EximiousSoft Logo Designer v3.30
Chess Portable 6
Mozilla တစ်ခုထဲကနေ Gmail နဲ့ Facebook အကောင့် 20 တ...
Using Laptops ( Ebook )
Flash Player Pro 5.5 Full Version
မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး၏ လျှို့ဝှက်ချက် ငါးခု